version 0.2.8 – CSS ကို Sprite
ဇူလိုင်လ 19, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
အဆိုပါဗားရှင်းသစ် CSS ကို sprite များနမူနာတွေအတွက်စမ်းသပ်ထောက်ခံမှုထပ်လောင်း. ဤသည်စာမျက်နှာဝန်ကြိမ်လျှော့နည်းစေ (သည့်အခါသက်ဆိုင်) နှင့် Google ၏စာမျက်နှာတွင်မြန်နှုန်းနဲ့ Yahoo ရဲ့ Yslow ရမှတ်များတိုးတက်. sprite များနမူနာတစျခုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုက်ညီဖို့ဖန်တီးခွင့်ပြုထားရာ Back-အဆုံး code ကိုတစ်ဦးထားလည်းရှိပါတယ် (သင်သာခြောက်လအလံနှင့်ရှိသည်မဟုတ်လျှင် 40, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး 12k ပုံရိပ်ကိုသုံး?). ဒါဟာသေးမရရှိနိုင်ပါသည် – ဒါပေမယ့်ငါတို့ကသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့သူမှန်ကန်သောဖိုင်များကိုပေးနိုင်ပါသည်, ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ဤ post ကိုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်. ကျနော်တို့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Marek Fišer ကိုယခုအသုံး blank.gif ဖျောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သော css တို့နှင့်မိမိအကူအညီတောင်း, ထို css ဖိုင်ထဲမှာပေမယ့်အစဘာသာ​​ပြန်ချက် interface ကိုသာ.
အနည်းငယ် bug တွေကြောင့်ဒီဗားရှင်းအတွက် fixed ခဲ့သည်, အဆိုပါ widget အတွက်မူရင်းဘာသာစကားမှပြန်လာသောနှင့်အတူ livewriter သုံးပြီးအနေဖြင့်ပြဿနာအထိ, ပြောင်းလဲမှုကို log ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်၏.
နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှု – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trac ကိုသုံးကျေးဇူးတင်ပါ (trac.transposh.org) bug တွေကြောင့် file မှ, ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကူညီရင်း (ပြီးတော့သင်) bug တွေကြောင့်တိုးတက်မှုအပေါ်ပိုကောင်းတုံ့ပြန်မှုနှင့်ခြေရာခံရ, စအတုအယောင်အလုပ်ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: css ကို sprite များ, အလံ sprite များ, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin